Waxaa qoray admin on 21-01-06
Joyroll wuxuu ku soo bandhigayaa INTERMAT, oo ka dhacaya inta udhaxeysa 23rd iyo 28th Abriil 2018 ee Paris, France. Rullaluistarka Conveyor, idlers conveyor, conveyor pulley, ayaa lagu soo bandhigi doonaa bandhiga ganacsiga. Liis buuxa oo ah badeecadaha iyo macluumaadka ku saabsan ganacsiga ayaa la muujin doonaa. Waxaan sugeynaa inaan soo dhaweyno ...
Ururka 'Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC)' waa kan hogaaminaya codka sahaminta iyo horumarinta bulshada. In ka badan 7,200 xubnood oo adduunka ku baahsan, xarumaha shaqada ee PDAC waxay ku saabsan taakuleynta waaxda macdanta ee tartanka, mas'uul ka ah PDAC waxaa caan ku ah adduunka sanad walba ...
Exponor, waxay muujineysaa inay ka dhacdo Antofagasta - Chile labadii sanoba mar, silsiladaha horumarka ugu dambeeyay ee loogu talagalay waaxda macdanta. Waa ilo istiraatiiji ah oo macluumaad ah oo ku saabsan maalgashiga mustaqbalka iyo fursad ay kula wadaagaan dhulka shirkadaha iyo soo bandhigayaasha. Gobolka Antofagasta wuxuu leeyahay ...